Imibuzo evame ukubuzwa - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Kungani imishini yakho yeqhwa isindisa amandla kakhulu kuneminye imishini yamaqhwa e-Chinese flake?
Sisebenzise ingxubevange yesiliva ukwenza i-flake ice evaporator. Le nto entsha enelungelo lobunikazi inokuhamba okungcono kakhulu kokushisa. Ukushintshaniswa kokushisa phakathi kwamanzi nefriji kungenziwa kahle, ngakho-ke, ukwenziwa kweqhwa sekusebenza kahle kakhulu, futhi kudingeka amandla amancane efriji.
Izinga lokushisa elihwamukelayo lezinhlelo livunyelwe ukuba liphakeme, njenge -18C. Amanzi angafriziwa kahle ngalelo zinga lokuhwamuka, kuyilapho ezinye izinkampani zaseChina kufanele zenze amasistimu azo anezinga lokushisa elihwamukile -22C.
Ukonga amandla = Ukonga imali kagesi.
Umshini owodwa weqhwa le-20T / day flake ungakusiza ukuthi ugcine kuze kufike ku-USD 600000 eminyakeni engama-20. Sibale ugesi ngentengo ye-USD 14 nge-100KWH ngayinye.
Ukonga amandla, usebenzisa izinto ezintsha ukwenza i-evaporator. Ngabe leyo nto entsha inesikhathi eside senkonzo?
Ingxubevange yesiliva yenziwe ngezinto eziningi, futhi inamandla aphindwe kabili kunensimbi yekhabhoni yendabuko.
Ngemuva kokwelapha ukushisa, ama-evaporator anezinto ezintsha ngeke abe nenkinga yokuphila isikhathi eside. Saqasha iqembu lochwepheshe ukwenza ukuhlolwa okuphelele eZhangjiang Ocean University. Futhi siyihlolile le nto ngemishini engaphezu kuka-1000 emakethe iminyaka engu-5.
Malini ngomshini wakho weqhwa
A: Sizocaphuna ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngakho-ke ikhasimende kufanele lisinikeze imininingwane elandelayo lapho-ke singacaphuna khona ngokufanele.
1.Yiluphi uhlobo lweqhwa okufanele lwenziwe? Iqhwa le-Flake, iqhwa le-tube, i-block ice, noma okunye?
2. Mangaki amathani eqhwa enza nsuku zonke, kungakapheli amahora angama-24?
3. Kuzoba yini ukusetshenziswa okuyinhloko kweqhwa? Ngokuqandisa izinhlanzi, noma okunye?
4.Ngitshele uhlelo lwakho mayelana nebhizinisi leqhwa, ngakho-ke sizokunikeza isisombululo esihle kakhulu ngokuya ngesipiliyoni sakho.